Ma i Xusuusataa? Shabakadaha Kukiyada
Khamiista, Sebtember 16, 2010 Tuesday, April 1, 2014 Nick Carter
Aad ayaan ugu xumahay magacyada. Waxaan jeclaan lahaa inaan ku rakibo buskudkaaga maskaxdayda si markasta oo aan kugu arko bulshada dhexdeeda way soo xasuusataa. Waxaan u maleynayaa inay taasi tahay hal dariiq oo kombiyuutarada ay uga “caqli badan yihiin” aadanaha. Laakiin, daciifnimadayda soo ifaysa awgeed, aad ayaan ula dhacsanahay markay kuwa kale si fudud ii xasuusan karaan ka dib hal fursad oo aan la kulmo. Waa xirfad. Ma ogtahay waxa ima cajabin: markay dadku been ka sheegaan. Kani waa wax aad u caadi ah kaniisaddayda, halkaas oo qof walba ku labisto sumado magacyo ah. Dabcan, iyadoo ay kaqeybgalayaan 700 oo qof, waxaa jira waxoogaa jalleecyo ah oo xabadka igajira kahor intaan dib loo helin xiriirka indhaha oo la yiraahdo, "Hi, Nick!" dhoola cadeyn. Waan layaabay
Hadda, xaddidaadaha aan soo sheegnay ee maskaxda bini-aadamka, waa wax cudurdaar leh in dadka ila shaqeeya ee ila shaqeeya aysan xusuusan magacayga. Marka maxaa cudurdaar la’aan ah? Marka kumbuyuutar uusan awoodin. Tiknoolajiyaddu aad ayey u fududahay in loo shaqaaleeyo xusuusinta dadka bogagga internetka si ay ugu fashilmaan. Si kastaba ha noqotee, qaar badan ayaa wali sameeya. Iyo, waxa ka sii daran, waa runti dheeraad ah jahwareer marka websaydhku runtii i xasuusan karin marka qofku uusan xusuusan karin.
Marka hore, qaado qof walba martida uu jecel yahay (ama, ugu yaraan martigelinta xayeysiinta) GoDaddy.
Waxaan ahay macmiil GoDaddy. Waxaan ahaa sanado. Iyo, sida ugu wanaagsan ee ay xusuustaan ​​magacayga markaan booqdo. Mar kasta oo aan bilaabo fadhi cusub GoDaddy.com, waxaa laygu salaamayaa "Soo dhawoow, Nicholas." Xitaa waxay ii sheegaan inaan haysto dhowr domains oo dhacayo, waxayna bixiyaan heshiisyo qaarkood (oo aan u maleynayo) in lagu xushay habdhaqankayga iibsashada.
Shaqo wanaagsan… ku dhowaad. Waa run, magacayga ayay soo xusuusteen. Laakiin, si ka duwan si aniga iila dhaqmayaan natiijada. Xaqiiqdii waxaan ku qoray GoDaddy cabashadan: markaan soo bandhigo, waxaad iila dhaqmaysaa sidii inaanan ahayn macmiil. Raadintu waa dhammaan waxyaabaha ka hor iibka ah. Haddii aan doonayo inaan gaaro degmooyinkeyga, bogaggeyga martigelinta, koontadayda, iwm, u maleyso waxa ay tahay inaan sameeyo: dhagsii xiriirka "adigu ma lihid" oo ka soo gal markale. Taas oo, habka, aan soo bandhigin foom cusub oo soo gal isla bogga. Maya, waa xiriir toos ah oo toos ah bog cusub oo ay tahay inuu raro.
Hadda, waan qaddarin karaa baahida loo qabo in la ilaaliyo macluumaadka u baahan gelitaanka. Runtiina, waan ku faraxsanahay inay sameeyaan. Si kastaba ha noqotee, LinkedIn waxay ku guuleysatay inay hesho hab caqli badan oo laguugu xusuusto adiga--run ahaantii ku xasuusintaada – hadana aan ilaalinayo waxa loo baahan yahay in laga ilaaliyo gelitaanka gadaashiisa.
Markii aan imaado LinkedIn.com, waan arki karaa wax kasta oo aan filayo inaan arko iyadoo la tixgelinayo inaan ahay isticmaale diiwaangashan runtiina ay i xasuustaan. Waxaan dhex mari karaa si aan kala go 'lahayn. Maaha xusuus faux ah. Si kastaba ha noqotee, Haddii aan isku dayo inaan diro, cusbooneysiiyo, ama wax ka beddelo xog kasta, waxay igu carqaladeeyaan wadahadal deg deg ah oo galitaan ah, oo runti xusuusta magaca adeegsigeyga. Marka, kaliya hal meel oo deg deg ah oo aan ku buuxiyo, ku dhufo gal, waxaanan sii wadaa si habsami leh.
Waxaan ka shaqeynayay sidii aan uga sii fiicnaan lahaa xusuusinta macaamiishayda, sidoo kale. Aniga site, Waxaan bixinay inaan xasuusano macaamiisha muddo dheer. Calaamee sanduuqa oo waan ku xasuusan doonnaa aqoonsigaaga galitaanka. Laakiin, dhawaan waxaan saaxiibkay ka bartay xeelad cusub Mack Earnhardt inaad rabto inaad shaqaalayso Haddii casharka qof dhacayo, ama haddii ay booqdaan xiriiriye u baahan soo galitaan marka hore, ka hor intaadan u tuurin shaashadda gelitaanka, ku kaydi isbeddel kalfadhi ah halka uu u socdo. Kadib, ka dib galitaanka guuleysta, waxaa loo wareejiyaa meeshii ay doonayeen inay aadaan. (Mahadsanid, Mack)
Habka ugu fiican ee lagu ogaan karo sida loo dejiyo bartaada si loo xasuusto booqdayaasha ayaa ah inaad noqo booqde joogto ah naftaada. U isticmaal goobta sidii macaamiishaadu u isticmaali lahaayeen, arag waxa shaqeeya iyo wixii aan shaqeynin. Ma qiyaasi karo in shaqaalaha GoDaddy ay dhab ahaantii adeegsadaan boggooda gaarka ah si ay u maareeyaan aaggooda - waxay u badan tahay sababta howshooda jahwareerka ah aan loo ogaan. LinkedIn, dhinaca kale, waxay u badan tahay inay aad ugu firfircoon tahay qalabkooda. Ma waxaad ku dhex socotaa kabaha macaamiishaada? Xusuusnow sida ay tahay inaad dareento inaad iloowday.
Adeegga Emailka ee runta ah ee keli ah
10 Waxyaabood oo ay Wakaaladdaadu waysay oo sii wadaysa inay ku dhaawacdo meheraddaada
Sep 16, 2010 at 12: 45 PM
Gabi ahaanba waan ku raacsanahay, Nick! Marka laga reebo jeclaanta GoDaddy, oo leh mid ka mid ah Shuruudaha Adeegga ee dabacsan ee warshadaha.
Sep 16, 2010 at 4: 33 PM
Haddii aad u maleyneyso in TOS-kooda dabacsan yahay, aqri tan. Geesh, waa yaab qofkasta inuu iga iibsado. (oops, waxay ahayd kor)
Sep 16, 2010 at 6: 04 PM
Dhibaatada iyaga ka jirtaa waxay tahay inay asal ahaan la wareegi karaan boggaaga iyadoon wax waraaqo sharci ah laga haynin. Akhri nodaddy.com qaar ka mid ah sheekooyinka naxdinta leh ee ku saabsan ganacsiyada lumiyay magacooda domain sabab la'aan.